Shaxda Isku Dhafka Barcelona Iyo Liverpool, Xiddigaha Kasoo Muuqday Iyo Kuwa Xoogga Lagaga Saaray Boosaskooda – Cadalool.com
Shaxda Isku Dhafka Barcelona Iyo Liverpool, Xiddigaha Kasoo Muuqday Iyo Kuwa Xoogga Lagaga Saaray Boosaskooda
Habeenka weyn ee fagaaraha ciyaaraha kubadda cagta kusoo socda ee ay iska hor imanayaan Liveprool iyo Barcelona ayaa soo dhowaanaya, waxaana ay warbaahinta iyo khubarada ciyaaruhu ku tilmaamayaan inuu noqon doono mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa ee dunida soo maray muddo toban sannadood ah amaba ka badan.
Barcelona ayaa Arbacada berri garoonkeeda Nou Camp u diyaarinaysay lugta hore ee Liverpool ay kusoo dhowaynayaan, taas oo ay xilli horeba hubkeeda oo dhan u heegan u gelisay inay kooxda reer Ingiriis ka takhalusto si markii saddexaad ay ugu suurtogeli karto inay qaataan saddexlay koobab ah.
Dhinaca kale, Liverpool oo sannadkii hore tagtay finalka Champions League ayaa waxa magaalada Kiev ku karbaashtay Real Madrid, waxaana doorkan ka go’an inay ka midho dhaliso hammigeeda hanashada horyaalka Yurub oo ay ugu dambaysay muddo 14 sannadood ka hor ah.
Barca waxa ugu dambaysay inay tagto finalka sannadkii 2015, waxaana uu u ahaa sannad taariikhi ah oo dhamaan tartamadii ay ka qayb-galeen ay koobabka ku wada guuleysteen, waxaana hormood u ahaa Lionel Messi oo markana sidii dhallinyarada xirfaddiisu dib ugu hillaacday.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shaxda isku dhafka labada kooxood ee Barcelona iyo Liverpool, taas oo ka kooban 11 ciyaartoy oo boos walba laacibka ugu fiican waqtigan loo soo qaatay.
Labada kooxoodba rikoodhka goolhayeyaashoodu wuu wanaagsan yahay, waxaana Alisson oo Liverpool ugu jira biraha dhexdooda uu xili ciyaareedkiisa ugu horreeyey ee hadda dhamaadka ah uu sabab u noqday in goolashii ugu yaraa kooxda laga dhaliyo. Sidaas oo kale, Marc-Andre ter Stegen ayaa ahaa mid kubbadaha soo gaadha si cajiib ah iskugu duuba, balse kala doorashada labadooda, waxa shaxda isku dhafka ah kusoo baxay goolhayaha reer Brazil ee Alisson Becker.
Sergio Roberto, Samedo iyo Jordi Alba oo Barcelona ah midkoodna boos kama helin shaxda isku dhafka ah, waxaana difaaca baallaha loo xushay Robertson iyo Alexander-Arnold, halka difaaca dhexena ay Matip, Lovren iyo Umtiti ay ka baxeen, isla markaana ay Gerard Pique iyo Virgil van Dirjk wada jir ugu soo baxeen.
Fabinho iyo Naby Keita oo bandhig ciyaareed wanaagsan muujiyey ayaa ka cidhiidhsan kari waayey Sergio Busquets iyo Ivan Rakitic oo shaxdan iska soo garab muuqda.
Shaxdan ayaa ah mid ku dhisan weerar ka kooban afarley, waxaana hoggaaminaya Luis Suarez oo geed iskaga xidhay Roberto Firmino, sidoo kalena Ousmane Dembele iyo Philippe Coutinho ayaan boos ku yeelanin.
Halkan, waxay labada kooxood u qaybsadeen si caddaalad ah oo midba laba ciyaartoy ay ku yeelatay, waxaana Barcelona ugu soo baxay Lionel Messi iyo Luis Suarez, halka Liverpool ay ugu jiraan Sadio Mane iyo Mohamed Salah.
Haddaba akhriste, shaxdan isku dhafka ah, ma kula tahay inay tahay midda ugu macquulsan ee laga samayn karayay labada kooxood, mise fikir ahaantaada waxaad saluug ka qabtaa qaar ka mid ah ciyaaryahannada oo aad jeclaan lahayd in kuwo kale lagu beddelo. Haddii jawaabtaadu tahay (HAA), fadlan halkan hoose kusoo qor shaxda isku-dhafka ah ee aad jeclaan lahayd.